Archive du 20170810
Raharaha Mamy Rakotoarivelo Fa aiza ny valin’ny « Autopsie » ?
Doudou DFP sy Paolo Raholinarivo Hifampitady manombok’izao
Hametraka ny taratasy fangatahana fidinana an-dalambe sy fihetsiketseham-bahoaka ny vovonana Politika Dinika Fanavotam-Pirenena (DFP) miaraka amin’ny Herin’ny Fanovana na “Force de changement” anio 10 aogositra, raha tsy misy ny fiovana.
Fahatsiarovana ny 10 aogositra Miha mangatsiaka hatrany
Miha dila hatrany arakaraky ny fivadibadiky ny taona ny fahatsiarovana ny diaben’ny fahafahana natao ny 10 aogositra 1991.Lohandohan’ny mpisorona nitarika ny Herivelona vory maro be teo amin’ny kianjan’ny 13 mey hihazo ny lapam-panjakana Iavoloha tamin’izany fotoana ry Pastera Richard Andriamanjato, Atoa isany Daniel Ramaromisa, Alain Ramaroson, Zafy Albert…
Afera Mamy Ravatomanga Hanakonana ny raharaha Claudine R
Tamin’ny alatsinainy hariva teo no tonga nisava ny trano fonenan’i Mamy Ravatomanga teny Ambohibao Amboaroy sy ny foiben’ny orinasa SODIAT etsy amin’ny Pradon Antanimena ny solontenan’ny Fampanoavana eto Antananarivo,
Ladoany any Toamasina Raikitra ny lavanty
Nanazava ny fisian’ity lavanty hatao eo anivon’ny fandin-tseranana Toamasina ny lefitry ny “receveur”, Rtoa Andrianafero Yolande, sy ny vadintany misahana ny fanaovana ny lavanty,
Fianakavian’ny zandary Rajaonarivelo A “Matimaty foana ny havanay”
Very an-javony ny ran’ny havanay latsaka tamin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny tanindrazana, hoy ny fianakavian’ny zandary iray antsoina hoe Rajaonarivelo Anjarasoa,
Taxi tsy ara-dalàna Andro aman’alina ny fanenjehana
Mitohy hatrany ny ezaka hataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra amin’ny famongorana ireo fiara karetsaka tsy ara-dalana eto amintsika.
Ny ahiahy tsy hihavanana
Omaly moa izany no nanomboka nampahafantatra am-pahibemaso ny vinan’asany ao anatin’ny fampihavanam-pirenena kasain’izy ireo ho tontosaina eto ireo kandida maniry mba ho isan’ireo ho mpampihavana 44 mianadahy eto amin’ny firenena.
Tsy ampy iray volana izao dia niharihary fa efa tsy voafehy sahady ny fiparitahan’ny sandoka amin’ireo vola vaovao navoakan’ny banky foiben’i Madagasikara. Isan’ny nahitana izany farany teo ny tao Sambava fa efa tsy ambakan’izany koa ny ao Nosy be,
Fanomanana ny fidiran’ny mpianatra Velon-taraina hatramin’ireo sekoly
Misedra olana tanteraka ireo tompona sekoly tsy miankina eto amintsika amin’izao fotoana izao manoloana ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra, indrindra fa ny fanavaozana sy fikarakarana ireo karazana kojakoja rehetra ilaina.
Faha-25 taonan’ny manala azy vita baka Fahombiazana tanteraka niaraka tamin’ny Airtel
Fahombiazana tanteraka tamin’ny ankapobeny no azo tamin’ny fankalazana ny faha-25 taonan’ilay hetsika “Manala Azy Vita Baka” nokarakarain’ny orinasam-pifandraisana Airtel ny 04 aogositra lasa teo teny Ivandry.
Halatr’omby 865 tany Miandrivazo Miantso ny fitsarana ho sahy hijoro ireo lasibatra
Lehilahy iray antsoina hoe Lemana Volon’Ampondra no hany voasambotry ny manam-pahefana ary efa tazonina any amin’ny fonjan’i Maintirano amin’izao fotoana izao noho ny raharaha halatr’omby hatrany amin’ny 865 tany Betsipolotra Miandrivazo ny volana mey 2016,